आर्थिक एकल व्यक्ति पेडल निलम्बित कार्य मंच - Sewbc.com
एकल व्यक्ति पेडल निलम्बित कार्य प्लेटफर्मको कार्यवाही सिद्धान्त
हाम्रो एक व्यक्ति पेडल निलम्बित कार्य प्लेटफर्ममा निलम्बन तंत्र समावेश छ जुन भवनहरूमा स्थापित हुन सक्छ। रस्सी द्वारा संचालित, सम्पूर्ण निलम्बित प्लेटफार्मले स्टील रस्सहरु संग ठाडो माथि र तल माथि उठाउनेछ।
हाम्रो एक व्यक्ति पेडल निलम्बित कार्य प्लेटफर्म एक हवाई कार्य निर्माण निर्माण पर्दे पर्खाल स्थापना र बाहिरी पर्खाल सफाईको लागि प्रयोग गरिएको हो। यो उत्पादन पलस्तर, भित्री, चित्रकारी, लंबा भवनहरु को सफाई र रखरखाव को लागी उपयुक्त छ र ठूलो टैंक, पुल, बांध आदि को निर्माण परियोजनाहरु लाई पनि लागू गर्न सकिन्छ .परंपरिक परंपरा को बदलन को रूप मा, हाम्रो हवाई कार्य मंच बारम्बार प्रयोग गरिएको श्रम तीव्रता, कार्यक्षमता वृद्धि र कम निर्माण लागत बढाउन मद्दत गर्दछ। निर्माणमा हाम्रो उत्पादन प्रयोग गरेर, लागत पारंपरिक घोडा प्रयोग गरी 28% हो। यो एल्यूमिनियम मिश्र धातु निलम्बित पहुँच प्लेटफर्मले लचीलो अपरेसन, सजिलो गति, उपयोगिता र सुरक्षा सुविधा दिन्छ।
एकल व्यक्ति पेडलको प्राविधिक मापदण्डहरू निलम्बित कार्य प्लेटफर्म
स्टील रस्सी (मिमी) Φ8.3 Φ8.3 Φ9.1 Φ8.6
लोभ पावर (किलोवाट) 1.5*2 1.5*2 1.8*2 2.2*2
भोल्टेज (V) 220,380,415,440 220,380,415,440 220,380,415,440 220,380,415,440
जस्ती अगाडि बीम ओभरहोङ (एम) 1.3~.1.5 1.3~1.5 1.3~1.5 1.3~.1.5
कडा वजन (किलोग्राम) 800 1000 1000 1200
एकल व्यक्ति पेडलको संरचना निलम्बित कार्य प्लेटफर्म
सम्पूर्ण निलम्बित प्लेटफर्म प्रणाली निम्न पाँच भागहरु संग मिलाईएको छ: (1) कार्यवाही मंच, (2) होस्ट, (3) सुरक्षा उपकरण, (4) विद्युत प्रणाली (5) निलम्बन तंत्र
(1) कार्य मंच
काम गर्ने प्लेटफार्म एक फ्रेम-आकार इस्पात (एल्यूमीनियम मिश्र धातु) संरचना हो जसले बोल्टद्वारा बेरिएको वेल्डेड सेन्टरहरू बनाएको छ। यो काम गर्ने प्लेटफार्म निर्माण अपरेटर र निर्माण सामग्री लिन प्रयोग गरिन्छ।
एकल व्यक्ति पेडल निलम्बित कार्य प्लेटफर्मको विशेषताहरू
a। सतह मा जंग र जंग को बिरुद्ध कार्य मंच को रक्षा गर्न एक ओक्साइड फिलिम हो।
बी। यो एउटै मोडेलको इस्पात प्रकार भन्दा 60% लाइटर हो।
c। उच्च मूल्याङ्कन गरिएको लोड क्षमताको साथ, हाम्रो एल्युमिनियम मिश्र धातु निलम्बित पहुँच प्लेटफर्ममा राम्रो विरोधी-टिल्टिंग प्रदर्शन छ।
घ। श्रम र समय दुवै बचत, यो परिवहन र स्थापना गर्न सजिलो छ।
ई। चमकदार चांदी ग्रे उपस्थिति यो उत्पादन सुरुचिपूर्ण देखिन्छ।
नोट: एल्यूमिनियम मिश्र धातु को काम गरेर रहेको प्लेटफार्म को अलावा, हामी पनि प्लास्टिक पाउडर को स्प्रेड स्टील र गर्म डुबकी जस्ती इस्पात को निलंबन को लागि तपाईं को चयन को लागि पिंजरों।
एकल व्यक्ति पेडलको फाइदा निलम्बित कार्य प्लेटफर्म
1. काम गर्ने प्लेटफार्म 1 मिनेट, 1.5 मिनेट,2मिनेट, 2.5 मिनेट र3मिनेटको साथ डिजाइन गरिएको छ। ग्राहकहरूले उनीहरूको वास्तविक आवश्यकता अनुसार उचित चयन गर्न सक्छन्।
2. हाम्रो कम्पनी पहिलो हो जसले जसले प्लेटफर्म फ्रेमको अन्त्य गर्न रगलन वेल्डिंग टेक्नोलोजीलाई स्वीकार्छ। यो प्रविधिले हाम्रो निलम्बित पिंजको बल बढाउँछ र यसलाई प्रयोग गर्न सुरक्षित गर्दछ।
3. तल बनावटको साथ तलको प्लेट 720mm चौडाईमा छ। यसलाई स्थापना गर्न सजिलो छ।
4. 360 डिग्री मोर्चाले निलम्बित कार्य प्लेटफर्मको आन्दोलनलाई सुविधा दिन्छ।
निलम्बित पहुँच प्लेटफार्मको प्रत्येक छेउमा उठ्ने एक सेट छ। म्यान-कास्टिङ एल्युमिनियमबाट बनेको (104 #, राष्ट्रिय स्तरको अनुरूप), होस्टको आवास तोक्न सजिलो छैन। रस्सी चरखी स्प्रिंग स्टीलबाट बनाइएको छ र कार्ट गियर 94 # टिन कांस्यबाट बनाइएको छ। यी सबै भागहरू, कीड़ा गियर बाहेक तापनि, ब्ल्याक र ओक्सीकरण उपचारको साथ प्रशोधन गरिन्छ।
लिमिटेड-सीरीज उठाउछ जुन विफलताबाट पुनःप्राप्त गर्न सक्दछ स्वचालित रूपमा हाम्रो कम्पनी द्वारा विकसित एक नयाँ उत्पादन हो। सबै प्रकारका परीक्षणहरूको माध्यमबाट, यो साबित भएको छ कि हाम्रो लिमिटेड-सीरीज उठ्ने स्वचालित रूपमा पुनःप्राप्त गर्न सक्दछ र जबरजस्ती रस्सी बनाइन्छ वा बल असरको कारणले काम गर्न सकिन्छ। यस प्रकार, इस्पात रस्सीको सेवा जीवन धेरै बढेको छ।
(3) सुरक्षा उपकरण
1. सुरक्षा लक र सुरक्षा इस्पात रस्सी: निलम्बित पहुँच प्लेटफर्मको प्रत्येक पक्षमा एक सुरक्षा लक र सुरक्षा इस्पात रस्सीको टुक्रा हो। यदि प्लेटफार्मको कामदार इस्पात रस्सी ब्रेक वा एक पक्ष झुकाउने छ भने, सुरक्षा लकले प्लेटफार्मलाई घटाउनेछ। (केन्द्रापसारक सुरक्षा लक वैकल्पिक हो।)
2. सुरक्षा रस्सी: सुरक्षा रस्सी, पनि जीवन रस्सी भनिन्छ, उच्च शक्ति फिलाटबाट बनाइन्छ र 18mm व्यासमा छ। जब निलम्बित प्लेटफर्म एक गलतीको कारण छिटो हुन्छ, सुरक्षा रस्सीले निर्माण कार्यकर्ताहरूलाई बिस्तारै रोक्नको लागि बलियो बनाउनेछ।
3. सीमा निकलावट: यो यन्त्रले निलम्बित प्लेटफर्मलाई ड्यासिङबाट रोक्न जब यो उच्चतम तहमा लिफ्ट हुन्छ।
5. केन्द्रापसारक गति सीमित उपकरण: यो यन्त्रले निलम्बित पहुँच प्लेटफर्म सुनिश्चित गर्दछ कि गति घटाउँदै रेटेड लिफ्ट गतिको 1.5 गुणा भन्दा अधिक छ, प्लेटफार्म अधिक स्थिर राख्दछ।
6. म्यानुअल उपकरण कम हुँदैछ: यदि बिजुलीको विफलता वा बिजुलीको विफलता हुन्छ भने, प्रयोगकर्ताले निलम्बित कार्य प्लेटफर्मलाई अन्धा बनाउन सक्छन् र कामदारलाई यो उपकरण प्रयोग गरेर सुरक्षित रूपमा मैदानमा पठाउन सक्दछ।
(4) एकल व्यक्ति पेडलको विद्युत प्रणाली निलम्बित कार्य प्लेटफर्म
हाम्रो निलम्बित पहुँच प्लेटफर्म को विद्युत प्रणाली मुख्य रूप देखि इलेक्ट्रिक केबल, ट्रांसफार्मर, रिसाव रक्षक र विद्युत नियंत्रण बक्स मा अन्य नियंत्रण स्विच शामिल छ।
1. ग्राहक प्यानललाई चिनियाँ, अंग्रेजी, रुसी वा अन्य भाषाहरूमा सेट गर्न सकिन्छ।
2. यस सकेटले युरोपेली मानक, अमेरिकी स्तर र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुरूप गर्दछ।
3. हामी प्रयोगको बिजुली केबल3× 2.5² +2× 1.5² केबलको रूपमा राष्ट्रिय स्तरमा छ। स्टील कोरको साथ, हाम्रो बिजुलीको केबल उच्च तनहुन्जेल बलियो र लामो सेवा सेवा छ।
(5) एकल व्यक्ति पेडल निलम्बित कार्य प्लेटफर्मको निलम्बन तंत्र
हाम्रो एल्युमिनियम मिश्र धातु निलम्बित रस्सी प्लेटफर्मको निलम्बन तंत्र एक भवनको छतमा सेट गर्न सकिन्छ। यो दुई सेट स्वतन्त्र इस्पात फ्रेम र इस्पात रस्सहरुमा बनाइएको छ। इस्पात फ्रेम को प्रत्येक सामने बीम मा, स्टील को दोहरी टुकडे को दो टुकडे हुन्छन्। एक होस्ट उठाने को लागि छ, जबकि अन्य एक सुरक्षा लक को लागि सुरक्षा रस्सी को रूप मा कार्य गर्दछ।
1. हामी इस्पात रस्सी प्रयोग गर्दछ FASTEN रस्सी, जुन विशेष निलम्बित पहुँच प्लेटफार्मको लागि डिजाइन गरिएको छ। गरम galvanizing संग खजाए, इस्पात रस्सी उच्च शक्ति र उत्कृष्ट जंग प्रतिरोध छ।
2. अगाडि र पछि बीम को आकार 50 × 110mm र 3.75mm मोटाई छ। मध्य बीम को आकार 60 × 120mm र यसको मोटाई 2.75 मिटर हुन्छ। आयताकार इस्पात फ्रेम वर्ग स्टील फ्रेम भन्दा उच्च तनहुँ प्रतिरोध छ।
3. निलम्बन तंत्रमा प्रायः 1.98 एम सम्म हटाइन्छ।
4. अगाडि, मध्य र रियर बीमले कुल समायोज्य लम्बाइ 5.2 देखि 7.6 मीटर सम्म लिन्छ। यस प्रकार यो निलम्बन तंत्रमा काम गर्न सक्षम छ जटिल फर्श फरक पार्छ।
5. निलम्बन तंत्र को भागहरु गरम galvanizing संग संसाधित गर्दै छन्, यसैले उनको उच्च चित्र प्रतिरोध को तुलना मा चित्रकारी उपचार संग संसाधित छ।
मोडेल संख्या: ZLP250, ZLP500, ZLP630, ZLP800, ZLP1000
नाम: एकल व्यक्ति पेडलले काम गर्ने प्लेटफर्म निलम्बित गर्यो
विभिन्न मोडेल बिजुली निर्माण काम गर्ने प्लेटफर्म पाडल लिपि
रस्सी निलम्बित प्लेटफर्म सुरक्षा, निलम्बित मचान प्लेटफार्म, निलम्बित तार रस्सी प्लेटफार्म, निलम्बित कार्य प्लेटफर्म सुरक्षा
7.5m एल्यूमिनियम निलम्बित रस्सी प्लेटफार्म 1000 किलोग्राम एकल चरण, गोन्डोला प्लेटफर्मको साथ
इस्पात / गर्म जस्ती / एल्यूमिनियम मिश्र धातु रस्सी प्लेटफार्म 1.5kw 380v 50 हर्ट्ज